Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiyeha Gawaarida Dekedda ee Jumlada ah. BWOO
Dual dulmar baabuurka dekedda
Magaca Summada: BWOO
Qaabka Badeecadda: CC54
Qalabka: ABS+PC -ga dab -damiska
Gelinta: DC 12-24V
Dammaanad: 12 bilood
Su'aalaha caadiga ah ee ku saabsan xeedho baabuurka Dual Port:
Q1: Baabuurka waxaa ku jira interface USB ah, markaa miyaan loo baahnayn in la isticmaalo xeedho dheeraad ah oo baabuurka dekedda USB ah?
Jawaab1 baabuurku waa 0.5A oo kaliya inta badan. Haddii korontada hadda aysan la jaanqaadi karin heerka qalabka, aaladuhu waxay heli doonaan kuleyl.
Q2. Waa kuwee shuruuddaha ay u baahan yihiin inay buuxiyaan xerooyinka baabuurta labada deked ee tayada leh?
A2: Marka hore, baahida dhabta ah ee ku dallacidda baytariga Lithium (CV-ga korantada joogtada ah, CC-da joogtada ah, ilaalinta xad-dhaafka ah OVP) waa in la tixgeliyaa marka la dooranayo deked USB badan leh ama xeedho baabuur laba-deked ah.
Marka labaad, bay'ada ba'an ee batteriga saaran (korantada ugu sarreysa ee ku-meelgaarka ah, beddelidda faragelinta qaylada, EMI, iwm) waa in la tixgeliyaa.
Sidaa darteed, maareynta awoodda IC ee loo xushay nidaamka lacag -qaadista baabuurka waa inay si isku mid ah u buuxisaa shuruudaha soo socda: ku -beddelidda qalabka korantada oo leh iska caabin sare, wax -ku -oolnimo sare, isku -halayn sare iyo soo noqnoqosho hoose (ku habboon naqshadda EMI).
Q3: Awoodda baytariga ayaa hoos u dhacda marka lagu dallacayo xeedho baabuurka dekedda USB?
A3: Mararka qaarkood dadku waxay jecel yihiin inay lacag ku dallacaan inta GPS -ga baabuurka ku jiro. Marka xaddiga korontada la isticmaalo inta uu ka badan yahay xaddiga korontada la qaado, way yaraan lahayd.
S1: Ma heli karnaa muunad ka mid ah marawaxadan baabuur ee dekedda?
J1: Haa. Waxaan ku siin karnaa saamiga baaritaankaaga.
Q2: Ma ku siin kartaa sanduuqa xirxirida naqshadeena?
A2: Waxaan ku siin karnaa adeegga OEM ee sanduuqa xirxirka oo leh naqshaddaada. Haddii aad u baahan tahay taageeradayada, waxaan kaa caawin karnaa naqshadeynta tixraacaaga.
Q3: Haddii aan doorbido inaan ku raro DHL express ma ii samayn doontaa taas?
A3: Haa, waxaan u diri doonnaa badeecada sida codsigaaga.
A4: Waxaan ku raran karnaa hawo ama bad. Haddii aad leedahay wakiilkaaga xamuulka, waan u gudbin karnaa.
Q5: Sideen u bixiyaa?
A5: Waxaad ku bixin kartaa USD/RMB adoo adeegsanaya T/T. Haddii aad doorbideyso shuruudaha lacag bixinta kale, fadlan nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
Hore: fiilo baabuur badan oo USB ah
Xiga: USB C Car Charger